Ciidamadii ugu horeeyay ee AMISOM oo Xalay gaaray Degaanka Kalabeyrka ee Gobolka Hiiraan
Boqolaal ah oo ka tirsan Ciidamada dalka Jabuuti ka socda qeybna ka ah AMISOM ayaa xalay markii ugu horeysay gaaray Gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Kalabeyrka iyo degmada Jawiil oo ku dhow Degmada Baladweyne.
Tirada ciidamada oo ah 300 askari aadna u qalabeysan ayaa la soo sheegayaa inay maantaba u sii talaabi doonaan Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan halkaasoo ay kala wareegi doonaan dhawaan ciidamada Itoobiyaanka ee haysta Magaaladaasi.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada Jabuuti oo ay la socdaan Saraakiil Faransiis ah ay ka soo galeen Hiiraan dhanka soonka 5aad ama dhulka Soomaalida Itoobiya halkaasoo ay xooga ku haystaan Itoobiyaanku.
Magaalada Baladweyne ayaa la sheegay in saldhigyo looga sii diyaariyay ciidamada Jabuuti si ay halkaasi u degaan waxaana warbaahinta dunidu la hadal hayaa in sida ugu dhow ciidamadaasi loo soo dhameystiri doono si ay iyagu ula wareegaan Gobolka Hiiraan meelaha ay Itoobiyaanku ka joogaan.
Dhinaca kale Imaanshiyaha Hiiraan ee Cutubka ugu horeeya askarta Amisom gaar ahaan kuwa Jabuuti ayaa ka danbeeyay markii dhawaan saraakiil sar sare oo ka tirsan amisom ay booqdeen magaalada Baladweyne ee xarunta G/hiiraan halkaasoo ay u tageen gogol xaarka meelaha ay ka degi lahaayeen ciidamadooda